रबि लामिछाने लाइ देखेपछी धर धरि रोए ज्ञानेन्द्र शाही (भिडियो सहित) – aajnepal
HomeNewsरबि लामिछाने लाइ देखेपछी धर धरि रोए ज्ञानेन्द्र शाही (भिडियो सहित)
June 5, 2019 aajnepal News 0
कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संग गर्न र आफ्नो हनिमुन एकै चोटी मनाउन अस्ट्रेलिया पुगेका रबि लामिछाने अस्ट्रेलिया बाट कार्यकम को तिन वटा इपिसोड पनि गरेर फर्कियाका छन् उक्त कार्यक्रम मा अस्ट्रलिया मा रहेका बिद्यार्थी हरुको दुख का कुरा सुनेर फर्किएका हुन् अस्ट्रेलिया मा भएको उक्त कार्यक्रम को निकै आलोचना समेत सामाजिक संजाल मा भएको थियो अस्ट्रेलिया मा पढ्न गएका बिध्यार्थीहरुले काम गरेर थाकेको राम्रो संनपाएको गुनासो सुनाउदा केहि दिन सामाजिक संजाल पुरै तातेको थियो ।
गत १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सुर्खेतमा आयोजित भ्रष्टचार विरुद्ध कार्यक्रमबाटै प्रहरीले शाहीलाई विना पुर्जी लछारपछार गर्दै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पछि प्रहरीले यातना दिएकै कारण ठाउँको, खुट्टा र शरीरको विभिन्न भागमा गहिरो चोट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। पत्रकारलाई गाली गरेको अभियोगमा उनीमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा लागेको छ। प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा शाहीलाई प्रहरीले यातना दिएर घाइते बनाएको र उनलाई पक्राउ विनपूर्जी पक्राउ गरेको पाइएको मानवअधिकार आयोगलेले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
साथै, शाहीको प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार गर्न र घरपरिवारलाई भेटघाटको व्यवस्था मिलान आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यातना दिएको उजुरी परेपछि आयोगले १७ गते घटनाको अनुगमन गरेको थियो । हाल शाहीको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर रहेको छ। उनी निकै रोईरहेका छन् र छिन् छिन् मै बेहोस पनि भएका छन्। अस्पतालमा शाहीका समर्थकले ‘ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रिहाइ गर’ देखि उपचार खर्च निशुल्क गर भन्दै नारा लगाई रहेका छन् । भिडियो :
यो पनी हेर्नुहोस्>>> फुलन्देको आमा बनेका उमेश राई, गल्फ्रेण्ड सँग डेटिङ्गमा यस्तो अवस्थामा भेटिए…(भिडियो सहित)
काठमाडौँ २१ जेठ, । पछिल्लो समय ‘नेपाल टेलिभिजन’ बाट प्रसारण हुँदै आएको निकै चर्चित कार्यक्रम ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’का एक पात्र हुन् फुलन्देकी आमा । उक्त कमेडी क्लबमा नेपालका नाम चलेका कलाकार र केही नयाँ कलाकारहरूको सहभागिता रहेको छ । हरेक सोमबार ९ बजे प्रसारण हुने कार्यक्रममा दीपा श्री निरौला सभापति रहेकी छिन् भने कार्यक्रम चर्चित हास्य सञ्चालन कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) ले गरेका छन् । जितु र दीपा सँगै, हास्य कलाकार राजाराम पौडेल, राजेन्द्र नेपाली (लट्टे), उमेश राई (फुलन्देकी आमा) र अन्य कलाकारहरूको अभिनय देख्न पाइन्छ । कार्य्रक्रममा उमेश राई फुलन्देकी आमा बनेका छन् । उनको प्रस्तुति धेरै दर्शकहरूले मन पराएका हुन्छन् ।
यो पनी हेर्नुहोस्>>> दाङमा भेटिइन् १६ वर्षीय सुन्दरी माता रोजना । कसरी प्राप्त भयो शक्ति ? यसो भन्छिन् माता (भिडियो सहित)
लमही २०, जेठ । दाङ जिल्लाको तुल्सिपुरमा एक सानै उमेरकी सुन्दरी माता भेटिएकी छिन् । उनी अहिले १६ वर्षकी भइन् । यती सानै उमेरमा पनि उनी माता बनेर बसेकी छिन् । झट्ट हेर्दा उनी एकदमै सुन्दरी पनि छिन् । जुन देखेर तपाइहरू आश्चर्य चकित पर्नुहुनेछ । १६ वर्षकी बालिका पढ्ने लेख्ने कलकलाउदो उमेरमा उनी माता बनेकी छिन् । उनी भूत, वर्तमान, भविष्य सबै बताउन सक्छिन् । उनले कसैले पनि छोएको खादैनिन्, छुट्टै खाने, छुट्टै बस्ने गर्छिन् । उनी सँग गरिएको कुराकानी सुन्दा अचम्म लाग्छ । आखिर सोह्र वर्षकै उमेरमा किन यसरी बसिन्? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
१६ वर्षीया रोजना खड्का स्कुलमा पनि छुट्टै बस्छिन् । ११ को परिक्षा दिएर बसेकी उनी व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थी हुन । २ वर्ष अघि देखी देवीदेवता चढेको र १ वर्षदेखि हेराउन थालेको बताउछिन् । रुकुम, रोल्पा, नेपालगन्ज लगायत थुप्रै स्थानबाट हेराउन आउने गरेको उनको भनाई छ । हुन त नेपालमा माता र ज्योतिषीहरू जहाँ तेही भेट्न सकिन्छ । कतिपयले यसप्रति विश्वास गर्छन् भने कतिपय बकवास ठान्दछन् । तर पनि विश्वास राखेर भेट्न जानेको लर्को भने बाक्लै देखिन्छ ।कतिपय ज्योतिषी, माताहरूले राजनीति सम्बन्धी भविष्यवाणी गर्ने, अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा विवादमा पनि परिरहेका छन् । तर रोजनाले भने यस्तो भविष्यवाणी क्यामेराको अगाडि गर्न चाहिनन् । यस्तै विवादमा तानिने हुनाले क्यामेरा अगाडि यस विषयमा नबोल्ने उनी बताउछिन् । बाँकी भिडियोमा हेरौँ उनी के भन्छिन्…